Is-af-garad horudhac ah oo laga gaaray isku-dhicii colaadeed ee ka dhacay magaalada Ceerigaabo iyo xaaladda oo ah mid deggan. – Radio Daljir
Is-af-garad horudhac ah oo laga gaaray isku-dhicii colaadeed ee ka dhacay magaalada Ceerigaabo iyo xaaladda oo ah mid deggan.
Ceerigaabo, Nov 08 ? Xaaladda magaalada Ceerigaabo ayaa ah mid deggan maanta kaddib markii darraad uu ka dhacay dagaal khasaaro dhimasho iyo dhaawac gaystay oo u dhaceeyey ciidamada maamulka Somaliland iyo mellayshiyaad hubaysan oo deegaanka ah.
Warar maanta oo Talaado ah laga helayo magaaladaasi ayaa ku waramaya xaaladdu in ay tahay mid deggan is-fahamka horudhac ahna laga gaaray dhibaatadii colaadeed ee maalintii Axadda ahayd ka dhacay magaalada Ceerigaabo taasoo timid kaddib markii dablay hubaysani ay wareer ku ekeeyeen guri ay ku sugnaayeen wasiiro ka tirsan maamulka Soomaaliland, kuwaasi oo halkaasi u tagay xallinta xiisado kuwaan ka sii horreeyey isla magaaladaasi ka dhacay.
Maxamuud Maxamed Jaamac , oo ka tirsan aqoonyahannada magaalada Ceerigaabo oo maanta aan ka waraysannay halka xaaladdu ku dambaysay ayaa sheegay inta badan waxyaabihii dhacay in la isla meeleeyey is-faham buuxana laga gaaray dhammaan arrimihii is-maandhaafka dhaliyey.
Maxamuud Maxamed Jaamac, waxaa kaloo uu Radio Daljir u sheegay in la xulay guddi dhaqan oo sii turxaan bixiyo haraadiga waxyaabihii laga wadahadlay ee ku aaddanaa xal-ka-gaaridda xiisaddaasi colaadeed oo ahayd mid muddo soo jiitamaysay, wasiirrada Soomaaliland-na ay la lug-heleen.
Horay ayaa labo beelood ee wada deggan magaalada Ceerigaabo colaadi ugu dhex-martay halkaasi, ahaydna mid muddo soo jiitamaysay, taasoo ahayd sababta ugu wayn ee wasiirrada la weeraray halkaasi ay u tageen.